Umlilo obulale abasibhozo kukrokrelwa uku uqalwe ngamabom – Elitsha
8th May 2018 Phinda KulaCape Town, Iyavela, Oorhulemente basemakhaya, Uncategorised 0 Xhosa
Ityotyombe lakwa Bangani litshe laphela. Umfanekiso uthathwe ngu Phinda Kula
Kusweleke abantu abasibhozo emveni komlilo okrokrelwa ukuba ubujoliswe kusapho lowasetyhini obetyholwa ngokuthakatha kwingingqi yobogityholo i Taiwan eSite C kwilokishi yaseKhayelitsha.
Lushiyeke luzintsizana usapho lakwaBangani emva kwesithwakumbe somlilo wetyotyombe oshiye kubhubhe abantu abasibhozo bosapho olunye kwindawo yogobityholo iTaiwan eSite C, Khayelitsha.
Lomlilo kudizwe ukuba uqale emva kwentsimbi yokuqala ezinzulwini zobusuku ngoMvulo. Amaxhoba aquka abantu abathathu abadala nabantwana abahlanu bebonke baphakathi kwesibini ukuya kumashumi amathandathu eminyaka ubudala.
Kukholeleka ukuba lomlilo uqalwe ngenjongo emva kwengxabano kwanomlo phakathi kwentombi yelikhaya nabatyholwa abathathu.
“Emva komlo singene endlini salungisa indawo yokulala nesithe emzuzwini seva ilizwi lomntu lisithi kuzakutsha umntu. Emva koko siye asahoya salala nanjengoko besiziselele amarhewu anomsila” itshilo intombi kamfikazi nesinde cebetshu uYonela Bangani.
Uthi bavuswe kurhaxwa ngumsi nalapho bathe xa bephakamisa iintloko labe sele libomvu ligcwele umsi ityotyombe labo. Ukuze asinde kumalangatye omlilo uphume ezimbanjeni zetyotyombe emva kokuba omnye wabo bebengaphakathi ekhabe izinki. Kukholeleka ukuba kugalelwe amafutha emoto phambi kokuba kuntunyekwe ngomlilo ityotyombe nothe wachaphazela amanye amabini.
U Yonela uthi intsusa yalo mlo ilandela emva kokuba ekhuphe ngetshova owasetyhini angamaziyo kwikhaya lakhe. Uthi ngethuba ingudulubhentsu bexhimfana kuye kwangenelela nabantu basebumelwaneni nadiza ukuba bebesoloko betyhola unina ngokuthakatha emveni kokuba kwasweleka intombi yasebumelwaneni kwiminyaka edlulileyo.
Kungokunje sele ekhona umtyholwa obanjiweyo noncwinwa ngemibuzo ngabakwantsasana logama abanye kubarhanelwa besacande amathafa.
Olusapho nekusele abantwana kuphela lijongene nomsebenzi wokungcwaba amaxhoba asibhozo nekulindeleke ukuba lomsebenzi wenziwe kwidolophu yakuCofimvaba kwiphondo leMpuma Koloni. Isithethi sosapho umnumzana uBangani uthi elikhaya alinaye umbutho ozakuthwala lomsebenzi nanjengoko beluxhomekeke kumama welikhaya onamashumi amathandathu eminyaka nongomnye wamaxhoba.
Amapolisa kwisikhululo saseKhayelitsha aqhuba uphando navakalise ukuba azakuququzelela usapho lukwazi ukufumana unyango lwemiphefumlo edandathekileyo.